Online Marg | लोकसेवा परीक्षा तयारी कसरी गर्ने? नेपाल सरकारका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दिए यस्ता उपयोगी टिप्सहरु
विद्यालय , कलेज र विश्वविद्यालयको पढाईको चारण पार गर्न लाग्दा धेरैजसो विद्यार्थीहरुको मनमा एक प्रश्न उठ्ने गर्छ, अव के जागीर खाने ? शैक्षिक उपाधिपछि काम खोज्नु राम्रो हो । ब्यक्ति विना काम बस्न सक्दैन । तर व्यक्तिको इच्छा तथा अभिमुखीकरणले बृत्ति चयनलाई निर्धारण गर्दछ । सवैका अपेक्षा एकै खालका हुदैनन्, कोही स्वरोजगार हुन चाहन्छन्, धेरैजसो भने जागीरको इच्छामा हुन्छन् ।
त्यसमध्ये पनि कोही निजी र संस्थात्मक क्षेत्रमा बृत्ति विकास गर्न चाहन्छन् भने कोही सार्वजनिक (सरकारी) सेवामा संलग्न भै सार्वजनिक बृत्ति अवलम्वन गर्ने चाहना राख्छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास भैसकेको छैन । सीमित उद्योग, कलकारखाना, बैंक, विद्यालय र सीमित रुपमा बहुराष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी क्षेत्रले बर्षेनी श्रम बजारमा जागिरको खोजीमा प्रवेश गर्ने युवाहरुको निकै सानो अंश मात्र खपत हुन्छ ।
पहूँचको दृष्टिमा पनि सवैलाई समान पहुँच हुने क्षेत्र होइन । सार्वजनिक क्षेत्रले पनि निकै थोरै मात्र युवालाई बृत्ति अवसर दिन्छ । तर सार्वजनिक क्षेत्र सवैको समान पहूच भएको क्षेत्र हो, सवैको समान अवसर र दावी रहने क्षेत्र हो । सवैको अपनत्व रहने क्षेत्र पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवामा युवाहरुको आकर्षण धेरै छ । तर धेरैजसो विद्यार्थीहरु सरकारी जागरीमा कसरी प्रवेश गर्ने ? के कस्ता विषयबस्तु बढ्ने ? परीक्षामा उत्तिर्ण कसरी हनु भन्ने विषमा जानकार हुदैनन् । प्रस्तुत लेख विश्वविद्यालयको पढाई पछि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता कसरी हा पार्ने रु परीक्षा पास हुने रणनीति के हुनुपदछ भन्ने विषयमा केन्द्रीत छ ।
आयोगले पाठ्यक्रम बताएपनि पाठ्यपुस्तक न प्रकाशन गर्छ न सिफरिस नै । त्यसैले विद्यालय रविश्वविद्यालय भन्दा भिन्न रुपमा परीक्षाको तयारी गर्नुपर्दछ । विद्यालयरविश्वविद्यालयमा राम्रो अंक ल्याएमा सफल भइन्छ, तर लोकसेवा आयोगको परीक्षा राम्रो अंक र स्तर भएर मात्र सफल भइन्छ भन्ने होइन, अरुलाई जित्न सक्नुपर्छ । किनकी सीमित पदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुने उम्मेदवारले अरुकोभन्दा राम्रो गर्नु पर्दछ, अनि मात्र सफल भइन्छ ।
 चालू आवधिक योजनारदीर्घकालीन सोच
प्रतियोगिता परीक्षा सफल हुन् पढ्ने रणनीति तयार गरेर त्यसै अनुरुप पढ्नु पर्दछ । पढ्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछस
 कानून तथा नीतिमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कसरी उतारिएको छ रु कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षको विवेचना गर्ने ।
 व्यवहारमा उतार्न नसकिएको वा स्थापित उदेश्य पुरा गर्न नसकिनुमा ९नसकिएको भए० कमजोरी कहा रह्यो रु खोतल्ने । कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए अझै राम्रो गर्न लिनुपर्ने कदमको विचरण गर्ने । जस्तो कि निजामती सेवाको विषयमा पढ्नु छ भने सर्वप्रथम यसको अर्थ, अवधारणा, सिद्धान्त, विकास क्रम, यसका विशेषता, कार्य र महत्वका विषयमा प्रष्ट हुने ।
निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न नेपालका कानूनहरु ९संविधान, निजामती सेवा ऐन, नियम, अन्य कानून० र नीति एवम् योजनामा उल्लेख गरिएका कुराहरुको राम्रो जानकारी राख्ने ।
निजामती सेवाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुका विषयमा ऐन, कानून र कार्यक्रमरनीतिहरुमा उल्लेख भएका कुराहरु कसरी कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषयमा बास्तविक जानकारी राख्ने ।
निजामती सेवाले सम्पादन गर्न नसकेका कामहरु ९जस्तो कि सेवा प्रवाह० किन त्यस अवस्थामा पुगेको होला रु के ले काम गर्न बाधा पु¥याएको छ रु स्रोत, सामग्री, क्षमता, मनोवल, कार्यसंस्कृति, कार्यवातावरण, के ले प्रभाव पारेको हो रु जानकारी राख्ने ।
कार्यसम्पादन गर्न वाधा पारेको कुरालाई कसरी फुकाउन सकिन्छ रु सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक बाटो देखाउने । अघिल्ला चरणहरुमा गहन रुपमा ज्ञान राखेपछि सुझाव दिन सकिन्छ ।
कलेज वा विद्यालयमा अपनाइएको लेखाइ शैली र ढाचाभन्दा प्रतिस्पर्धा परीक्षामा लेख्ने ढाँचा, शैली र संरचना केही फरक हुनसक्छ । लेखाइ अक्षरको अभिव्यक्तिमात्र होइन, भावना, विचार र तथ्यहरु अपनत्व हुने किसिमबाट प्रस्तुत गर्नु परीक्षाको लेखाई हो । लेखाइको संरचना हुन्छ, शैली हुन्छ र खास पदले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका आधारमा त्यो लेखाइ संक्षिप्त, विश्लेषणत्मक र विवेचनात्मक हुने गर्दछ । जे होस लेख्दा ज्ञान ९जानकारी०, तथ्य र अनुभवका आधारमा लेखिनु पर्दछ । यस सम्बन्धी विस्तृत पक्ष यसपछिको बुदा ९परीक्षामा प्रस्तुत हुने तरिका० मा उल्लेख गरिएको छ ।
 प्रश्नले के कति भार ९अंक र समय० वोकेको छ रु सो स्पष्ट हुन आवश्यक छ । एउटै प्रश्नमा एकभन्दा बढी प्रश्नहरु गुजुल्टिएका हुन सक्छन् । सवै प्रश्न र उपप्रश्नमा निश्चित भार छ भन्ने वुझेर उत्तर दिनुपर्दछ ।
Tags :गोपीनाथ मैनालीबार्षिक कार्यतालिकालोकसेवा परीक्षा तयारी